Iindaba -I-COVID-19 yesixhobo sokuhambisa izixhobo kubungakanani bemakethi, isabelo, imfuno, imikhwa, uhlalutyo kumzi-mveliso, amanani ehlabathi ngo-2021
Isiseko sedatha seDatabridgemarketresearch.com songeze "i-COVID-19 yeDrive yokuThengiswa kweziXhobo kwiNtengiso-yeTekhnoloji yoShishino kunye noQikelelo kwi2028". Ingxelo yephepha ububanzi: iigraphics ezingama-350: iitafile ezingama-60: ama-220 amaphepha Imakethi yezixhobo zokuhambisa iziyobisi ze-COVID-19 ichaza imbonakalo yolu shishino olupheleleyo ngohlalutyo olunzulu. Ingxelo ikwasekwe kumathuba, isalathiso somtsalane wentengiso kunye nenqanaba lokukhula, abadlali abaphambili kunye nabafika kolu shishino, indawo enokhuphiswano, ukuthengisa, amaxabiso, ingeniso, umda opheleleyo, isabelo sentengiso, umngcipheko wentengiso, amathuba, izithintelo zentengiso kunye nemiceli mngeni. Iinkcukacha manani eziphambili zeemeko zentengiso. Oku kunika umbono ocacileyo malunga nokwahluka kwemveliso kwaye kubonelela ngokuqonda imeko yokhuphiswano lwehlabathi.
Ingxelo yoPhando yeXyz iqulethe isishwankathelo esifutshane sentsingiselo kunye neendlela. Ngesi sizathu, iintsingiselo kunye neendlela ezinokuthi zincede umntu othabatha inxaxheba kwimarike kwishishini aqonde imakethi kwaye aphuhlise iindlela zokukhulisa umbutho. Ingxelo yophando yeenkcukacha-manani ihlolisisa ubungakanani bentengiso iyonke, isabelo sentengiso, amaqhekeza emarike aphambili, ukukhula, abaqhubi abaphambili, i-CAGR, idatha yezembali, imeko zentengiso yangoku kunye neemfuno zomsebenzisi wokugqibela, okusingqongileyo, ukuveliswa kwetekhnoloji, ubuchwephesha obuzayo, kunye nezakhono zeshishini eziphuculweyo.
Imakethi yezixhobo zokuhambisa iziyobisi ze-COVID-19, ngohlobo lwemveliso (iisirinji ezikhethiweyo, iisirinji ezingenaliti, i-inhalers, iipatches), indlela yolawulo (i-parenteral, impumlo, ulusu), abasebenzisi bokugqibela (iikhemesti zesibhedlele, iikhemesti zentengiso, iiKhemesti ezikwi-Intanethi) , amazwe (eUnited States, Canada, Mexico, Germany, Italy, United Kingdom, France, Spain, Netherlands, Belgium, Switzerland, Turkey, Russia, Russia, eYurophu, eJapan, China, India, South Korea, Australia, Singapore, Malaysia, I-Thailand, i-Indonesia, i-Philippines, i-Asia-Pacific, iBrazil, iArgentina, nezinye iindawo zoMzantsi Melika, uMzantsi Afrika, iSaudi Arabia, i-UAE, i-Egypt, i-Israel, i-Middle East kunye nezinye iindawo zase-Afrika) zeshishini kunye noqikelelo ukuya ku-2028
Imarike yesixhobo sokuhambisa iziyobisi i-COVID-19 kulindeleke ukuba ifumane ukukhula kweemarike ngexesha eliqikelelweyo ukusuka ku-2021 ukuya ku-2028. Inkampani yophando yentengiso yeDathaBridge ihlalutya ukuba intengiso izokhula ukusuka kwi-USD 2,309.40 yezigidi kwi-2020 ukuya kwi-USD 4.0372 yezigidi kwi-2028, kwaye iya kukhula kwi i-CAGR yexabiso lokukhula konyaka. Ngexesha eliqikelelweyo ngasentla, ibiyi-7.22%.
Khuphela isampulu yasimahla (iphepha le-350 lephepha le-PDF): Funda malunga nefuthe le-COVID-19 kule [imeyile ikhuselweyo] https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-covid-19- iziyobisi -Ukuhambisa izixhobo kwintengiso kunye nasemva kwemini
Ukuhanjiswa kweziyobisi kubhekisa kwimixube eyahlukeneyo, iindlela, ubuchule, kunye neenkqubo ezisetyenziselwa ukuhambisa iikhompawundi zamayeza emzimbeni ukufezekisa ngokukhuselekileyo iziphumo zonyango abazithandayo. Isixhobo sokuhambisa iziyobisi i-COVID-19 luhlobo oluthile lwesixhobo esihambisa iziyobisi okanye iiarhente zonyango ngendlela ethile yolawulo, kwaye oomatshini abathile basetyenziswa njengenxalenye yendlela enye okanye ezingaphezulu zonyango.
Ngenxa yokunqongophala kwezitofu zokugonya ezoneleyo okanye unyango, iinzame zabadlali abaphambili zokukhawulezisa ukwenziwa kwamachiza amatsha anokunyanga intsholongwane ziyanda kakhulu, ezichaphazela kakhulu i-COVID-ehambelana nokuhanjiswa kweziyobisi ezili-19 Imakethi yezixhobo, kuqikelelo ixesha elisusela kowama-2021 ukuya kowama-2028, ukunqongophala kweziyobisi ezoneleyo kunye nokungabikho kweendlela ezisebenzayo zolawulo lwe-COVID-19 nako kunegalelo ekukhuleni kweemarike zehlabathi. Kuquka ezona zitofu zibalaseleyo zokujongana neemfuno ezingxamisekileyo ezibangelwa ngulo bhubhane nazo zibe negalelo kuhlumo lwentengiso. Kwangokunjalo, ukwanda kwengeniso elahlwayo kunika abantu ithuba lokufumana unyango olusebenzayo kwizinto eziphambili, oko ke kukonyusa ukukhula kweemarike ngeli xesha lichazwe ngasentla. Nangona kunjalo, iindleko ezinkulu zophando kunye nophuhliso ziya kunciphisa izinga lokukhula kwe-COVID-19 yentengiso yezixhobo zentengiso.
Ukonyusa utyalomali yimibutho yabucala naseburhulumenteni ukwandisa ukufikeleleka kwamanyathelo afanelekileyo, kunye nokwandisa imisebenzi kwicandelo lophando kunye nophuhliso lwezixhobo zonyango ezifanelekileyo, kuya kuqhubela phambili ukukhawulezisa ukwandiswa kwemakethi yezixhobo zokuhambisa iziyobisi ze-COVID-19 kunye nokubonelela nge-A. Ithuba elikhulu lokukhula liza kuphehlelelwa kwintengiso ngexesha eliqikelelweyo ukusuka ku-2021 ukuya ku-2028.
Funda [ukhuselwe nge-imeyile] https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-covid-19-drug-delivery-devices-market?
Ingxelo yezixhobo zokuhambisa iziyobisi ze-COVID-19 inikezela ngolwazi oluneenkcukacha malunga nezinto zakutshanje, imigaqo yorhwebo, uhlalutyo lokungenisa kunye nokuthumela kwelinye ilizwe, uhlalutyo lwemveliso, ukwenziwa kweetyathanga lexabiso, isabelo sentengiso, ifuthe labathathi-nxaxheba basekhaya nabasekhaya, kwaye isekwe kwingeniso evelayo. ihlalutya amathuba, utshintsho kwimimiselo yeemarike, uhlalutyo lokukhula kweemarike, ubungakanani bemakethi, ukukhula kwemakethi yodidi, indawo zesicelo kunye nezikhundla eziphambili, ukuvunywa kwemveliso, ukwaziswa kwemveliso, ukwandiswa kwejografi, kunye nezinto ezintsha zethekhnoloji yentengiso. Ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga ne-COVID-19 yentengiso yezixhobo zentengiso, nceda unxibelelane neSebe loPhando lweMarike yoPhando ngeprofayile yomhlalutyi. Iqela lethu liya kukunceda ukuba uthathe izigqibo ngemakethi unolwazi ukufezekisa ukukhula kweemarike.
Imakethi yesixhobo sokuhambisa iziyobisi i-COVID-19 yahlulwe ngokweendidi zemveliso, indlela yolawulo, kunye nomsebenzisi wokugqibela. Ukukhula kwezi ziqendu zentengiso kuya kukunceda uhlalutye amacandelo angabalulekanga okukhula kolu shishino kunye nokubonelela abasebenzisi ngesishwankathelo esibalulekileyo sentengiso kunye nokuqonda kweemarike ukubanceda benze izigqibo zobuchule zokuchonga ezona zicelo zentengiso.
Njengoko sele kukhankanyiwe apha ngasentla, i-COVID-19 yezixhobo zokuhambisa iziyobisi zihlalutyiwe, kwaye ubungakanani bemakethi yokuqonda kunye neendlela ezibonelelwa ngayo lilizwe, uhlobo lwemveliso, indlela yokuhambisa iziyobisi, kunye nomsebenzisi wokugqibela.
Amazwe agutyungelwe yingxelo yentengiso yezixhobo ze-COVID-19 nguMntla Melika, iUnited States, iCanada neMexico, iJamani, iFrance, i-United Kingdom, iNetherlands, iSwitzerland, iBelgium, iRussia, i-Itali, iSpain, iTurkey, nezinye iYurophu. amazwe / imimandla, China, Japan, India, South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Indonesia, Philippines, Other Asia Pacific (APAC), Saudi Arabia, UAE, South Africa, Egypt, Israel, other Middle East kunye ne-Afrika ( MEA) njengenxalenye yoMbindi Mpuma kunye ne-Afrika (MEA)), iBrazil, iArgentina kunye noMzantsi Melika wonke bayinxalenye yoMzantsi Merika.
Ummandla waseMntla Melika unesikhundla esiphambili kwimakethi yezixhobo zokuhambisa iziyobisi ze-COVID-19 kunye nezixhobo zonyango ezifanelekileyo kunye nokubakho kwenani elikhulu leenkampani eziphambili zamayeza kuloo mmandla. Ngenxa yesiseko esikhulu sabemi, ukukhula okubonakalayo kwamatyala abhalisiweyo e-COVID-19 kunye nokukhula ngokukhawuleza kwenkxaso-mali yophando kulo mmandla, indawo yeAsia-Pacific kulindeleke ukuba ikhule ngenqanaba elibalulekileyo ngexesha lokuqikelela ukusuka ku-2021 ukuya ku-2028.
Ngolwazi oluthe kratya, nceda ufumane ikhathalogu eneenkcukacha simahla ku https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-covid-19-drug-delivery-devices-market&pm
Icandelo "leLizwe / loMmandla" le-COVID-19 yeNgxelo yeNtengiso yeziXhobo zeNtengiso ikwabonelela ngeendlela ezahlukeneyo zorhwebo kunye notshintsho kwimigaqo yentengiso yasekhaya, eya kuthi ichaphazele imeko yangoku neyekamva yentengiso. Amanqaku edatha afana nokusetyenziswa, indawo yokuvelisa kunye nobungakanani, uhlalutyo lokungenisa kunye nokuthumela kwelinye ilizwe, uhlalutyo lwamaxabiso, izinto ezisezantsi, uhlalutyo lwamaxabiso asezantsi nonyukayo kunye namanye amanqaku edatha zezinye zezikhombisi ezisetyenziselwa ukuqikelela iimeko zentengiso kumazwe ahlukeneyo. Ukongeza, xa unikezela ngohlalutyo lokuqikelela kwedatha yesizwe, umntu kufuneka acinge ngobukho kunye nokufumaneka kweempawu zehlabathi, kunye nemiceli mngeni ejongene nokhuphiswano olunamandla okanye olomeleleyo phakathi kweempawu zasekhaya nezasekhaya, kunye nefuthe leerhafu zasekhaya kunye neendlela zorhwebo.
Izixhobo zokuhambisa iziyobisi ze-COVID-19 kunye neesirinji zemveliso yokuhambisa iisirinji zikwabonelela ngohlalutyo olunenkcukacha lweemarike zokukhula kwenkcitho yezixhobo ezikhulu kwilizwe ngalinye, isiseko sokufakwa kweentlobo ezahlukeneyo zeemveliso kwimakethi yezixhobo ze-COVID-19 , Ukusetyenziswa kweendlela zokuphila kunye nefuthe lobuchwephesha lotshintsho Ukusetyenziswa kwimeko yolawulo lwezempilo kunye nefuthe lazo kwimarike yezixhobo zokuhambisa iziyobisi ze-COVID-19. Idatha isebenza kwixesha lembali ukusuka ngo-2010 ukuya ku-2019.
Eyona ndlela yokuqikelela ikamva kukuqonda imeko yangoku! Idatha Bridge ngokwayo yinto engaqhelekanga kunye nophando lwangoku kwimakethi kunye nenkampani yokubonisana, eneendlela ezingenakuthelekiswa nanto kunye neendlela zokudibanisa. Sizimisele ukuphonononga awona mathuba mahle okuthengisa kunye nokuphuhlisa ulwazi olusebenzayo ukuze ishishini lakho likhule kwimarike. Idatha Ibhulorho izibophelele ekunikezeleni ngezisombululo ezifanelekileyo kwimiceli mngeni eshishinayo nasekumiliselweni kwenkqubo engenzi mgangqo yokwenza izigqibo.
Ixesha Post: Feb-27-2021
Umatshini wokuPhawula iBhotile yoRhwebo, Umshicileli weLayibhile yeeBhotile zeJar, Indibano yesirinji kunye neNkqubo yokuPhawula, Phezulu kunye nasezantsi kwelebheli, Umatshini wokuTywina wePlastiki, Umatshini wokufaka iilebheli kwiibhokisi,